Puntland kana siib kana saar. W/Q Shiine Culay | RBC Radio
Dowladda Japan oo sheegtay inay …
Muqdisho[RBC Radio]Xukuumada Japan ayaa si cadd u xaqiijisey…
Al Shabaab oo sargaal sare ku di…
Beledweyne[RBC Radio]Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan,waxaa xalay…
Villa-Somalia : Saacid na dhaaf …
Villa-Somalia : Saacid na dhaaf maxaa Xigi doona…
SOMALIA: A Djiboutian soldier lo…
Beletweyn (RBC) A Djiboutian soldier in Beletweyne has…
SOMALIA: Al Shabab fighters murd…
Elbur (RBC) In a central Somalia town, the…
SOMALIA: Speaker Jawari to visit…
Mogadishu (RBC) The Speaker of the Federal Parliament…
Musharax Cabdiweli Gaas oo maant…
Boosaaso[RBC Radio] Musharax Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa…
Musharax Maxamed Cabdinuur :''Wa…
_________________ Boosaaso Use Facebook to Comment on this…
Puntland kana siib kana saar. W/Q Shiine Culay
Opinion, RBC, Wararka
Puntland kana siib kana saar – Qaybtii 1-aad
Nofeembar 01 2013
Riwaayadan oo ah mid taxane ah todobaadkiina mar soo bixi doonta waxaan kaga hadli doonaa doorashada Madaxtooyada ee Puntland oo lagu wado inay dhacdo 8 Jan, 2014 anigoo hadba ku cabiri doona rayul caamka guud .
Qaybta koowaad ee riwaayada Puntland kana siib kana saar waxaa isku waraysanaya laba nin (Cawaale & Catoosh) oo saaxiibo ahaan jiray hase yeeshee mudo dheer is mooganaa hadana isugu yimi Magaalada Garoowe si ay uga qayb qaataan ololaha doorashada.
Cawaale:- War catoosh ii waran mudo badan beynu is mooganayne maxaa war & wacaal haysaa ?
Catoosh: Cawaaloow saaxiib waa nabad belo lama sheegin sidaad ii ogayd meeshii Boosaaso baan fadhiyey dadku caadaas bey marayeen wax Beeyadooda guranayey, qaar Ahmi dhoofsanayey & kuwo baayac mushtar ku mashquulsanaa intaba qaylo kama yeerin, dhankaaga maxaa cusub?
Cawaale: Eebe mahadiis weeye wax shido ah lays kuma waraysan meeshii …….. ahayd baan mudo dhowr sano ah joogay ini rag wax Ciidan qorta, wax Garoowe u shaqo taga, wax Faroole mucaarada & Kuwo Federaal aaday intaba waa la haayeen, Safarkaagu muxuu daaran yahay ?
Catoosh: Boowe waxaa isoo gaartay in Madaxweyne la dooranayo marka ololaha doorashada baan qayb ka ahay ?.
Cawaale: KKKKKKK Waa arrin wanaagsan laakiin doorashadu khibrad siyaasadeed bey rabtaa dukaan la gadayo maaha idinkuna dhankaas iskuma wanaagsanayn taas soo xisaabta kuma darsan?.
Catoosh: Aa la tahay! War ini rag faro isku soo gaar maanta waxba la isma dheera anagu waxaanu aaminsanahay in aanu idin dhaafnay waayo 2 sano oo aad mucaaradka ku mashquulsanaydeen dee anagu Duruus, Dimuqraadiyad, Cilmi kororsi & qaabka dadka loo soo jiito baanu baranaynay waad la socotay oo anigu xisbigii HORCAD baan asaasyaashiisa ku jiray marka yaa na celin kara ?
Cawaale: War catoosh kuwaasi Xisbiyo maahayn been la dhoodhoobay bey ahaayeen ee meesha ha ku hafan oo shilinka lacagta ah yaan lagaaga furan cidi Madaxweyne kuu dooran mayso e, Ragii ilaa lixdankii (1960) aan lahayn camal aan ka ahayn siyaasad & Xisbiyo baa fooda is darayee dhan uun uga bayr.
Catoosh: Boowe miyaanu Dastuurku qorayn in Madaxweyne muwaadinkasta oo reer Puntland ah loo dooran karo ? Aniguse xagee ka imi miyaanan dalka qayb lahayn ?.
Cawaale: War ma beentii Faroole meelahaas la wareegayey baad maqashay jagadaas Madaxweynaha nina uma ogoli adiguna waa ogtahay laakiin Dalku waa in ka dhaxeeyaa haday Wasiir noqon lahayd & haday Agaasime noqon lahayd qaybtiinaad helaysaan laakiin Toloow kursigaas yaan laysku xiijin, Idinka codadkiina maxaan kaga tashanaa?
Catoosh: War ba, kol hadii xaajadu tahay Kana siib kana saar !!! walee ninkaas Cabdiraxmaan Ciiltire (Faroole) baan codka siinayaa oo markale dooranayaa.
Cawaale: War cadaalad xumidaa waad ogtahay reer Garoowe 4 sano oo ay xaq u lahaayeen & 1 sano oo xaq daro ah bey qaateen wax caqliga geli kara maaha ragii maanta kursiga xaqa u lahaa baan dhaafsiinayaa oo kuwo dheregsan baan ugu sii darayaa, Idinku se maxaa naga waayeysaan oo Faroole ugu ordaysaan?
Catoosh: Boowe ninkaasi wuxuu aaminsan yahay in xukunka loo siman yahay dadkuna isku xuquuqyihiin, 5-tii sano ee uu xafiiska joogay waxqabad dhab ah buu muujiyey, Xilalkii muhiimka ahaa beeshiisa kuma koobin ee qayb fiican buu naga siiyey, Wuxuuna balan qaaday inuu dalka Dimuqraadiyad gaarsiin doono hadii mar kale la doorto, marka intii aan dooran lahaa mid aanan garan karin wuxuu la iman doono soo la iima qaadan inaan isaga mar kale doorto?
Cawaale: Waa wareey Ayax teg eelna reeb, waa hubaa Faroole teg laakiin waxaa wax kasta igaga daran sidii la idiin ka mayri lahaa khiyaaliga uu idin ku qanciyey maxay tahay Asxaabta & waxaad sheegaysaa war ma Yurub baa la joogaa?.
Catoosh: Cawaale duni casri ah beynu joognaa Shacabku Horumar, Sinaan, Dimuqraadiyada, Waxbarasho & Xasilooni bey rabaan cida gaarsiin karta oo Waxqabadkeeda horay loo soo tijaabiyeyna waa Ciiltire (Faroole) Waa ka soo daalnay xaal mastuur & Maantana beeshaas ha loo daayo?.
Cawaale: Walee hadii Faroole markale la doorto dagaal baan ka xigaa meeshana waa lagu kala yaaci doonaa?
Catoosh: KKKKKKK Boowe Dalku Ciidamo buu leeyahay, Caqli baynu leenahay, Dowladnimo & sharaf kuma bedel doono fawdo, Ninkii arkii jire doon ah raga kama weyna sharciga bey is arki doonaan .
Cawaale: War ileyn belaayo nin meeli u cadahay waxba lama oran karo war shir baan ka daahay ee maxaa inoo balan ah maxaanse kaaga tashadaa?.
Catoosh: Waxaa inoo balan ah :
Dalka Nabad ha loo daayo
Madaxweyne Ciiltire (Faroole) ha loo doorto
Reer bari Dowladnimada ha la siiyo
Dhulbahante Dayrta ha la raadsho
Warsangeli Deked halal doono
Isimada Duco halaga tuugo
Cawaale: War hooy is deji doon degaysaa dabada haysataa e, Anigu afar hal baan leeyahay kursiga Madaxweynaha :
Daruuraha hilaaciyo Dayax nuurayaad tahay
Puntland Dirkeediyo dun xariira baa tahay
Daawadii Siyaasadiyo Dookhaygii baa tahay
Markii aad I Deeqdee quruxdaadan daawado
Qalbigaa ku dararoo indhahaa ku doogsada
Kuma deyn karaayoo xilalkaan kuugu jecelahee
Kuu daacad baan ahee wacadkii ha sii deyn
Kuu daacad baan ahee yaan laysku keen dirin
Catoosh: Anigu 4 hal waxaan leeyahay Kursiga 4 kalena waxaan kula dardaarmayaa Madaxweyne Cabdiraxmaan Sh. Maxamed Maxamuud (Faroole) :-
Ninka Damacu raacee
Dookhu calanka saartee
Wanaag aad ka doontee
Kugu gacan danbeeyana
Dardaaranka Madaxweynaha .
Kursigaas ka doontoow
Deji meel barwaaqo ah
Dibin daabyo yuu arag
Ha u yaalo dahabkuna
Deris aan haboonayn
Yuu dareemin qayladiisa
Dibada & gudahaba
Beelaha la daawado
Ha il doogsadee gee
Cawaale: Ilma adeeri waa in istaqaan 8 Jan, baa inoo balan ah, Maca salaama .
Catoosh: Boowe, Is maqal danbe .
Kala duwanaanshaha Ama…
Falanqayn: Kala duwanaanshaha Amaanka Puntland 2009 &…
8 Responses to Puntland kana siib kana saar. W/Q Shiine Culay	Ahmed Faarax November 2, 2013 at 5:51 am	Shiine Coley Waa La Soconaa Shalayna Faroole ayuu maagayay, Xisbiyada ayuu toosh ku shidaayey. Maantana Waxa uu doonayaa inuu naga iibsho Faroole. Waar Shiinow Waxaan ku idhi Waar Saaxiib Faroole waanu naqaan 5 sano ayuu dalkan iyo dadkan reer Budlayn Xukumaayey. Dhibaatooyinka uu gaystey waxaa ka mid ah:
1. Midnimadii Umadda Reer Budland oo uu Haddaan ka tuurey. KHaatumo oo samaysmatey, Degmada Xudun oo ka baxday gacanta Budlayn. horta qodobkaas waa mid oo Jiritaankii Budlayn waa dheeliyey oo Badh baa maqan.
2. Sanaag oo ah Shiino Halka aad kasoo jeedo xilligii XIsbiyo ku sheega Faroole ay isu soo baxayeen Waad Ogayd Badhan, Dhahar, Hadaaftimo, Xiingalool illaa Xeebta waxaa yimid Wasiiro iyo Ciidamo Somalilandi ah oo hodh istaagay inay sanaadiiqda Faroole soo gaadhaan Deegaankaas Sanaag oo ay yidhaahdeen waa Deegaanada Somaliland. Waad Ogayd in Sanaadiiqdii la geeyey qaadh ka mid ah Ceerigaabo lagu gubay oo Media SOmalilandi soo gudbiyey.
3. Amniga: Dalkii Amni kama jiro intii Faroole haystey waxaa meel kale iska daaye lagu diley Xildhibaankii u horeeyey ee Budlayn lagu dilo AUN Ibraam Cilmi Gaab, Waxaa la diley Col. Nadalo oo Taliye ku xigeenkii Ciidanka Bilayska ahaa, waxaa Garowe lagu diley Xldhibaan Sheebe , waxaa la diley AUN Sh C/qaadir Nuur Faara saraakiil kale ayaa iyana lagu diley waa tusaale.
4. Waxaa wadanka la keenay Shirkado Ajaanib oo sharci daro ah kuwaas oo macdanta dalkeena baadhta ee qaata, waxay qaadanayeen Ugaadhta dalkeenu hodanka ku hayay sida Deerada, Cawsha iyo Godhayada. Saracen waxay u shaqeysaa Farole iyo wiilashiisa ciidamada Somalida ah waa Ciidan Qabiil oo madaxwaynuhu leeyahay kuwaas ayaa la dhisay tabobar iyo daryeel fiican la siiyey halka la ilaaway Ciidamadii Puntland ku xisabtami jirtey ee Daraawiishta. haddii meel qaylo kasoo yeedho waxaa loo didhayaa Madaxtooyada sow wax lala yaabo maaha.
4. Dhaqaale darada dalka ay gayiisiiyeen Faroole iyo Aadhan jaankiisu. Ciidamadii iyo Shaqaalhii dowladda 7 bilood Mushaar may qaadan, sanadkii hore 5 bilood baa ka maqan isku dar waa 12 bilood oo mushaar la’aan ah xagee la geeyey dhaqaalahaas Marna Xisbiyadii Xaaraanta ahaa baa lagu maalgalinayay marna Doorashadan baa loo aruursaday.Dhaqaalaha waxaa cuna kooxyar oo jifo ah iyo dhawr daba dhilif ah. Ciidankiina Mushaar iyo wax uu dab ku shito ayuu la’yahay Aadhanjaana Caruurtoodii Nairobi iyo Kampala ayay gaysteen oo ay hadba diyaadhad uGu gooshayaan oo hadba sahay safadh Wasiirka Maaliyada ay kasii qaadanayaan.
6. Cadaalad darada. Garsoor shaqeynaya ma jidho, Umad loo kala xaq soodhayaayi majidho Dhaqaalaha looma sinna, Shaqosiinta dowlada looma sinna .
7. Maamulka iyo Siyaasadda: Waxaa la waregay Wilasha Faroole wasiir talo dhiiba karaahi ma jidho waad la socotaa oo waa adigii Shinow Sanadkii tagay soo qodhi jidhay Dhibaatooyinka maamulxumada ah iyo Maamulkii oo ay Faroole iyo Caruurtiisu Boqodhtoyo ka dhigteen. Maxaad na odhanaysaa manta Waa Ciil Tire Awalba shalay Dhaqaale raadis baad ahay Shiinow ee Qadiyad iyo wax iftiimin kaama aysan ahayn.
Saxafinimadaadu Waxay noqotey Shiinow Wixii la idinku sheegaayay inaad qaadatey ee ahaa laaluush ( Sharuur). Marka Runtu Allay taqaan. Faroole iyo Kacaankiisuba waa ay tagayaan Inshaa Allaahu waxaa badali doona Hogaamiye dhalinyaro ah aqoon leh Taladana umadda wax ka siinaya ee aan Group Aadhan Jaan oo kale ah aan siin doonin. Waxa sharci daro ah ee dalka ka jidhaahina waa la laalayaa waxbaana laga qaban doonaa.
myare November 2, 2013 at 6:16 am	RR iyo Shiine way mahadsan yihiin aniga warka shiine waxa iiga baxay mar kowaad taageerada madaxwayne faroole waana arin kuqabatay kadib waxa kale oo iibaxay in kursigu dhaxal yahay sidad cadaysay hadii arinku sidaa yahay maxay kaga duwan tahay sagaal nin oo walala ah sideedi isku bah tahay ninkuna bah gooni yahay sideedu ninkii siri ninkuna sirtii garan hadaynu isa siri sideenaba maynu iska kala tagno sideedaba maxay arinka sidaa kaga duwan tahay maxaynuse soomali kagadi mahadsanidiin.
Hiirad November 2, 2013 at 7:08 am	Wax in la iskula haro siduu faroole uu yiri waa muqadas, waana hadal mug weyn, ragga u hadla sidii afkey furan, ogaada it only takes one man to remember you, pray that man never becomes your leader oo markaa sidey tahay kugula xisaabtama, we don’t like traitors.
FYI, faroole is clearly heading for second term, markaa yaan loo kala dhuuman gaajayahay baahan, atleast siyaasad macaan ciyaara oo keensada rag macquul ah, laakiin gaagaab iyo gablax iyo samatar aqli ma aha, Puntlanders are too smart to be tricked like that, waa la is yaqaan, ogaadana wakhtigii jirri nimada is over, rag macquul ah oo talada puntland lagu aamini karo keena cid idinka xigta malahane hadii kale naga daaya sheeka xariirta.
amin November 2, 2013 at 8:46 am	ha. Shino wa riwayad san u fahmay dadka u shegaysa inay dadwangsan doortan mu jinaysana dadku inay u siman yihiin hogaminta umada dhul,udug punt-land kaliya waxan jeclaan laha in ladoorto madax dhalinyaro ah aqoonaleh iyo karti wadaniyina ah lagaso bilabo aas aski pntld waxa hogaminayay ama wasiro ka,aha adayal ila 1960ki tagna waxanleyahy hada wa xilgi dhalinyarada iyo aqonta ogada ma,ahan xiligi nin karmed ladoranlaha ama oday rug cada ah we need change we need change
Wiil November 2, 2013 at 3:09 pm	As ani waxaan oran lahaa riwaayadaan waxay cadaynayaa cadaalad darada xaqa umada aykudhacayaan waan kumahadsanyahay qoraagu inuu iftiimiyo xalada ountland hadaan uhadlo dadka aan ahayn dadka kursiga xoogaaya ee doonaaya sad bursiga umada waxaan leeyahay hadii puntland laga rabo mustaqbal la idin arag waxaad maamuli kartaan ee umada jaanis siiya kalee oo baneeya meesha isku xishoodoo
jibril November 2, 2013 at 9:40 pm	Kana siib kana saar sounds like a sex novel, cinwaanka waa kaa qaldanyahay, plus sawirkaaga looks like you were born out of wedlock,Lol. Naga leexo yaanan ku dardarine, howl baa laguu hayaa, stay out of the way,,..
gaalkacyo November 6, 2013 at 5:59 am	Ciil tire janadaa inoo balana shiine halkaas ka hay faroole ha ladaayo
sool November 6, 2013 at 6:10 am	faroole waa u qalbaa marlabaad inuu soolaabto lkn waa hadii uu soo celinayo magaalooyinka nagamaqan
Dowladda Japan oo sheegtay inay Soomaaliya garab istaageyso[Sawirro]
Al Shabaab oo sargaal sare ku dishay guddaha Beledweyne
Villa-Somalia : Saacid na dhaaf maxaa Xigi doona!!. W/Q Maxamed Cali Madhoodhe
Ogeysiis ku socda Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minneapolis!!
Musharax Cabdiweli Gaas oo maanta la kulmay Madaxda Rugta Ganacsiga Iyo Ganacsatada Puntland [Sawirro+VIDEO]
SOMALIA: A Djiboutian soldier lost his life in Beletweyne during a morning sweep operation
SOMALIA: Al Shabab fighters murder respected elder in Central Somalia region
SOMALIA: Speaker Jawari to visit Baydhaba town to encourage formation of new regional autonomous state